कोरोना संक्रमण भएको २४ घण्टा नबित्दै अस्पताल भर्ना भए ट्रम्प, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
१ओली-प्रचण्डबीच फेरी पानी बारबार, केन्द्रीय कमिटी बैठक र महाधिवेशन अनिश्‍चित
२कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार गोपाल सिवाको निधन
३नबिल बैंक एडीबीको ‘नेपालमा अग्रणी पार्टनर बैंक’ अवार्डबाट सम्मानित
४फेरि १ महिना देशव्यापी लकडाउनको घोषणा, यी क्षेत्रहरुमा लाग्ने छैन प्रतिबन्ध
५विश्वभर एकैदिन ५ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण, ७ हजार बढीको मृत्यु
६नेपालमा फेरी कोरोना संक्रमण अझै बढ्ने विज्ञहरू चेतावनी, के हाे कारण ?
७भारतमा ५१ नेपाली विद्यार्थी निर्घात कु’टिए, शिक्षकहरुलाई समेत मोबाइल खोसेर बन्धक बनाइयाे
८डोटीमा घ’ट्यो यस्तो दुखद घ’टना, एकै परिवारका २ जनाको मृत्यु
९भोलिबाट दैनिक कोभिड–१९ प्रेस ब्रिफिङ नहुने, यस्ताे छ कारण
१०थप १९५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
११काठमाडौँ उपत्यमा थपिए ८४३ जना नयाँ कोरोना सक्रमित
१२नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित
कोरोना संक्रमण भएको २४ घण्टा नबित्दै अस्पताल भर्ना भए ट्रम्प, केछ अवस्था ?
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । कोरोना संक्रमण भएको २४ घण्टा नबित्दै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
उनी हाल वाल्टर रिड नेसनल मेडिकल सेन्टरमा उपचाररत रहेका छन् । उनलाई आज बिहानबाट ज्वरो आएको चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ । यसअघि शुक्रबार बिहान उनले ट्वीट गर्दै आफू र पत्नी मेलानिया ट्रम्पलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका थिए।
संक्रमण देखिए पनि कुनै लक्षण नदेखिएकाले होम आइसोलेसनमा बसेका ट्रम्प थकान महसुस गर्नाका साथै उनमा कोभिड-१९ का हल्का लक्षण पनि देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएसँगै उहाँपनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित विश्व नेताहरुको सूचीमा परेका छन् । यसअघि, अन्य केही देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरु पनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका थिए । सबैको छोटो चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुने विश्व नेताहरुमध्ये पहिलो हुनु । उनलाई गत अप्रिलमा संक्रमित भएपछि ‘आइसीयू’मै राख्नुपरेको थियो । उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन नै दिनुपरेको थियो । तर, भेन्टिलेटरको आवश्यकता भने परेको थिएन । उनले एकान्तबासमै बसेर पनि केही सीमित व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो कामहरु पनि गरेका थिए ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई गत जुलाईमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको थियो । उनले संक्रमित भएको बेला मलेरियाविरुद्धको औषधि प्रयोग गरेर कोरोनाभाइरसका लागि मलेरियाविरुद्धको औषधिले काम गर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेका थिए। त्यो अहिलेपनि अप्रमाणित नै रहेको छ । उनले सामाजिक दुरी काम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्नेलगायत मान्यतालाई बेवास्ता गर्ने गरेका थिए। उनी ‘लकडाउन’विरोधी नेताकारुपमा पनि चिनिन्छन् । उनकी श्रीमती पनि संक्रमित भएकी थिइन् ।
होन्डुरसका राष्ट्रपति हुवान ओर्लान्डो हर्नान्डेजलाई गत जुन महिनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । राष्ट्रपति हर्नान्डेजसँगै उनकी आफ्नी श्रीमती र दुईजना सहयोगीमा पनि संक्रमण देखिएको थियो । तर, उनमा लक्षण भने सामान्यमात्रै देखिएको उनले बताएका थिए । उनले आफूमा संक्रमण भएपनि आफ्नो काम भने विद्युतीय माध्यमबाट गरेका थिए ।
कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका विश्व नेताहरुको सूचीमा गुटेमालाका राष्ट्रपति एजेन्ड्रो गियामाते पनि छन् । उनलाई गत सेप्टेम्बरमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । आफूलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् उनले आफूलाई कुनै लक्षणहरु भने नदेखिएको उल्लेख गरेका थिए । उनलेप नि आफू छुट्टै बस्ने र कार्यालयका काम भने गरिरहने बताएका थिए ।
बोलिभियाका अन्तरिम राष्ट्रपति जेनिन अनेज पनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका थिए । उनलाई गत जुलाईमा संक्रमण भएको हो । संक्रमित भएपछि उनी‘आइसोलेसन’मा बसेका थिए । उनले त्यो बेलामा कुनै असजिलो भने महसुस गरेका भने थिएनन् । कोरोनाबाट संक्रमित हुने उनी ल्याटिन अमेरिकी तेस्रो राष्ट्रप्रमुख थिए । त्यसअघि, ब्राजिली राष्ट्रपति बोल्सेनारो र होन्डुरसका राष्ट्रपति हर्नान्डेजमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अनेजको कार्यालयका केही सदस्यहरुमा संक्रमणको पुष्टि भएपछि उनको पनि परीक्षण गराउँदा उनमा संक्रमण देखिएको हो । बोलिभियामा सरकारका चारजना शीर्ष अधिकारीहरुमा समेत कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो ।
गणतन्त्र डोमिनिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस अबिनाडेर जुलाईमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भउका थिए । उनी आफ्नो चुनाव प्रचारप्रसार अभियानकैक्रममा संक्रमित भइ संक्रमणमुक्त भएको जनाइएको छ । उनले आफ्नो निर्वाचन हुनुअगाडि नै हप्ता लामो आइसोलेसनमा पनि बस्नुपरेको थियो ।
कोरोनाभाइरसको महामारीको मध्यपूर्वको केन्द्रविन्दु बनेको इरानका पनि उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरु कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका थिए । देशका वरिष्ठ उपराष्ट्रपति इशाक जाहानगिरि र उपराष्ट्रपति मस्सौमेह इब्तेकरमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु पनि संक्रमित भएका थिए ।
यीबाहेक रूसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्तिन, आर्मिनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पसिनयान, बेलायतका राजकुमार चार्ल्सलाई पनि कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसैगरी, धेरै देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखका श्रीमती तथा परिवारजन र धेरै देशका मन्त्रीसहितका उच्च अधिकारीहरु पनि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका थिए ।
विश्वभर कोरोना भाइरसका कुल संक्रमितको ७४ प्रतिशत निको भएका छन् । शनिबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमित भएका ३ करोड ४८ लाख १७ हजार ८५२ मध्ये ७४ दशमलव ३५ प्रतिशत निको भएका हुन् । अर्थात् २ करोड ५८ लाख ८५ हजार ३७५ जना निको भएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख २३ हजारभन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ३ लाख १४ हजार बढी संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै एकै दिन थप ५ हजार १२३ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १० लाख ३२ हजार २६१ पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा २ लाख २४ हजार ४० जनाको मृत्यु भएको छ । ५१ लाख ९० हजार ३५९ जना संक्रमित भएकोमा २५ लाख ७९ हजार ४६७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा ३ लाख १३ हजार ८८६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
संक्रमितको संख्या ९० लाख १३ हजार ७७४ पुगेको छ । त्यसमध्ये ५८ लाख ३३ हजार २५९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा १ लाख ९८ हजार २७८ जनाको मृत्यु भएको छ । १ करोड ८ लाख ६७ हजार ४१३ जना संक्रमित भएकोमा ९१ लाख ३६ हजार २५६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा २ लाख ५८ हजार ८२३ जनाको मृत्यु भएको छ । ८१ लाख ८६ हजार ६७४ जना संक्रमित भएकोमा ७० लाख ३७ हजार ६५९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूमा ३६ हजार २८८ जनाको ज्यान गएको छ भने १५ लाख ५ हजार ९७६ संक्रमित छन् ।
संक्रमितमध्ये १२ लाख ४६ हजार १५८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा ९३१ जनाको मृत्यु भएको छ । ३१ हजार ४११ जना संक्रमित भएकोमा २८ हजार ६८२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बितेको २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै २ हजार ७२२ संक्रमित थपिएका छन् ।
पछिल्लो एक साताको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या बढेको छ । अहिले २१ हजार २३४ जनामा संक्रय संक्रमण छ । संक्रमितको संख्या यही दरमा बढ्दै गए नेपालले कोरोनाको उद्‍गमस्थल चीनलाई एकदुईदिनमा उछिन्ने मात्र होइन बिस्तारै संसारकै सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेका देशहरुको सूचीमा पर्ने देखिएको छ।
चाडवार्ड नजिकिएको र सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिएकाले नेपाल संसारमै धेरै असरपर्ने मुलुकहरुमा पर्ने देखिएको छ। शुक्रबारको तथ्यांक अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा एकैदिन १ हजार ६३८ संक्रमित थपिएका छन् । विश्वमा कोरोनाको संक्रमण र अवस्थाबारे अपडेट गरिरहेको अनलाइन पोर्टल वल्डो मिटर्सको तथ्यांक अनुसार नेपाल उच्च संक्रमितको देशको सूचीमा माथि चढ्नेक्रम बढेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल उच्च संक्रमणमा रहेका विश्वका देशको सूचीमा ४६औँ स्थानमा पुगेको छ। वल्डो मिटर्सको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै संक्रमित अमेरिकामा छन् । दोस्रो धेरै संक्रमण फैलिएको देश भारत हो ।
फेरि १ महिना देशव्यापी लकडाउनको घोषणा, यी क्षेत्रहरुमा लाग्ने छैन प्रतिबन्ध
अमेरिकालाई चीनले दियो फेरि यस्तो कडा चेतावनी, यस्तो छ कारण
विद्यार्थीहरु पढिरहेको ठाँउमा अचानक शक्तिशाली बि-स्फोट, ८ जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि देशव्यापी कर्फ्यूको घोषणा, कहिलेबाट हुन्छ लागु ?